ငါကစွဲလမ်းသူလား Dr. Sue မှ (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် porn တွင်ပြုလုပ်သည်
... ကိုယ့်လုနီးပါးယခုငါးနှစ်ကြာသွားများအတွက် Findom ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ငါကအရမ်းအစအဦးကတည်းကသူမရဲ့ကလစ်များနှင့် pics မှ masturbating ပါပြီ။ အခုတော့ကိုယ်ကဒီဘာသာရပ်အပေါ်ကိုအနည်းငယ်စာဖတ်ခြင်းအမှုကိုပြုပါပြီပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ် ထွက်. ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်လုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးပြီးခဲ့သည့်အချိန်, ကိုယ်ကအရမ်းရှက်ခဲ့တယ်ပေးသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူရယ်သည့်အခါကိုယ်သင်ျခြိုဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်သောအရာသည်ငါ့ဆီသို့သူမ၏အီးမေးလ်များကိုတဦးကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုတောင်နှိုးဆော်ခြင်းရ, ကိုယ့်နေဆဲသူမ၏ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါတစ်ဦးပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိ, သူ့ pics မြင်နေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်ခုခွဲထုတ်ဆဲတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူးဘာလို့ငါနားမလည်ကြဘူး။ ငါသည်ဤအလွန်ဒေါက်တာ Sue အားဖြင့်နှောင့်အယှက်တာပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲဘော့ရှိဝမ်းနည်ပါသည်။ ငါကသူတို့အပြုအမူများနှင့်စွဲမှကြွလာသောအခါကောက်ဖို့ခုန်ဖို့စကားပြောဖို့အတော်များများယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်အများကြီးန်းကျင်အောင်မြင်ပြီးရရှိစေတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဂန္ porn စွဲတစ်ကယ့်ကိုစံနမူနာကောငျးဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုသိသာယောက်ျားသည်ယနေ့ရှိခြင်းနေသောကိစ္စများအများစုမှလှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။ porn ပိုပြီးအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါကကျိန်းသေအငယ်နှင့်အငယ်အသက်အရွယ်မှာယောက်ျားပိုမိုမှီဖြစ်ခြင်းနှင့်ရန်အသုံးပြုသည်ထက်ဖြစ်၏ 12 ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်လေးတွေ porn စွဲဖြစ်လာကြပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ဒီမှာ kicker ရဲ့ညစ်ညမ်းစွဲ Psychiatry ၏သန့်ရှင်းသော grail သော DSM-5 (Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်) တွင်မတည်ရှိပါဘူးဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာကြောင်းဟာအလွန်လေးနက်သောပြဿနာတည်ရှိခြင်းနှင့်တကယ်တော့သိ ။ က DSM မှကြွလာသောအခါအဆိုပါအသိပေးချက်ကြောင့်အကြီးအကျယ်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းကလွှမ်းမိုးကြောင်းဖြစ်ပြီးတကယ်သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံပေါင်းသတင်းအချက်အလက်များအများစု antiquated ဖြစ်ပါတယ်ထက်တံဆိပ်ကပ်ပုံမမှန်ပိုမိုစိုးရိမ်သည်။ ဥပမာသူတို့ဆဲ paraphilia (fetish) ရှိခြင်းခံစားရမယ့်စိတ်ရောဂါအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ [ပဲသင်၏အခြေခံ '' ကတဆင့်ရ '' ရန်စိတ်ကျန်းမာရေးဘုံအတွက်ရတဲ့မည်သူမဆိုအကြံပေးအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ
ကျောင်းပညာရေးကိုသင်လေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်အရာကို 99.9% သင့်ရဲ့လူနာကနေအခြေခံအားဖြင့်ဆီလျှော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဟောင်းရဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - ။ အကြောင်းပြချက်အတွင်းသိသာ] ဒီတော့၌ထညျ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ထိုအဟောင်းများကို codgers ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့အဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိသောကွောငျ့ မလက်တွေ့ '' အားဖြင့်-The-စာအုပ် '' ကုသမှုအစီအစဉ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်စာအုပ်ဆိုင်။ သို့သော်သူကကုသမရနိုငျဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာတစ်ခုခုကပ်သည်အထိသင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကြိုးစားကြတဲ့ဆရာအဖြစ်ကိုဆိုလိုသည်။ ရဲ့ငါဘော့တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲရှိပြီးထင်ဘာဖြစ်လို့မှာပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုကြပါစို့။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - သင်နှစ်သက်တဲ့ porn ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးဖက်မြင်လူသားအစားတစ်ဦးနှစ်ဦးရှုထောင်ပုံရိပ်မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးစိုက်ထူရရန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူရရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။
Dissociation / အိမ်တွင်းပုန်း - ဆက်စပ်သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခြင်းအပြင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်စာနာမှုရှိသည်ဖို့အဆိုပါနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ သင်သည်သင်၏ porn, သင့်ညစ်ညမ်းချင်သောကွောငျ့သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နာကျင်ကျိန်းစပ်ကိုရှာဖွေ start '' သင်သည်ရရှိသွားတဲ့။ '' ငါသင်သည်သူတို့တော့ဘူးမကျင့်သော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ရရန်မည်သို့သိသောကြောင့်လူကြီးလူကောင်းသောသူတို့သည်ရုံပိုကောင်း masturbating ကဲ့သို့ငါ့ကိုပြောပြခဲ့ကြပါပြီ။
သငျသညျသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထွက်ရပ်တန့်ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ခုတည်းဆိုရင်ဒါဟာသိပ်အလုပ်တစ်ခုခုကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ပါကပျောက်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းထံမှသင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကယနေ့အထိနှောင့်ရှက်ကြဘူးဘယ်မှာကိုလည်းသင်အိမ်တွင်းပုန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါအချို့အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ယောက်ျား porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးမှုခြိမ်းခြောက် masturbate မှအလုပ်ကနေအိမ်ပြန်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
လူမှုစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။ သူတို့ပယ်ချမရနိုင်ဘယ်မှာလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်အိမ်မှာနေဖို့ဒီတော့ထွက်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ချဉ်းကပ်၏စိတ်ကူးလွန်းဖြစ်လာသည်။ ဘဝအပျိုကညာအတွက်ကဲ့သို့သောများစွာသောနှောင်းပိုင်းက porn စွဲဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအရေအတွက်ကတဦးတည်းဖြစ်၏။ ဒီတော့ Bob ၏အမှု၌သင်တို့ကိုသူမရှိတော့တစ်ခုစိုက်ထူသို့မဟုတ်သူသည်၎င်း၏အားနည်းတတ်သို့မဟုတ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာင်သည့်အခါထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့မတတျနိုငျပါလျှင်ရနိုင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုမင်းသည်သက်ဆိုင်ရာခံရဖို့ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာသည် D & s ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အခြားဒြပ်စင်တစ်ခုတွင်ပေါင်းထည့်ရမည်။ ဤသည်အလုံအလောက်အပြစ်မဲ့ထွက်စတင်ခဲ့သည်။ သင် Domme တစ်ခုကိုရှာသည်၊ သူမကလစ်များကိုဝယ်သည်။ သင်ကဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည်။ သူမဘာမှမလုပ်ဘဲသူမကိုရိုက်ကူးထားသည့်အရာများကိုကြည့်ပြီးသို့မဟုတ်သင်အသံကျယ်နေသောအချိန်တွင်သူမ၏အော်ဒီယိုများကိုနားထောင်ရန်ပြောသည်။ ၎င်းမှာပြissuesနာနှစ်ခုရှိသည်။ သူပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်သူမ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းသည် Domme သိသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သူမ၏တာ ၀ န်မဟုတ်ဘဲ၊ သူမ၏ဝင်ငွေကိုဂရုစိုက်ပါကသူမအနေဖြင့်ဤပြtypeနာမျိုးအတွက်အစီအစဉ်ရှိသင့်သည်၊ သို့သော်လုံးဝရိုးသားရန်အတွက်အမျိုးသားအများစုသည်အမိန့်ကိုမလိုက်နာကြပါ။ သူတို့က ၀ ယ်တယ်၊ သူတို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းပဲအစေခံတယ်၊ ဒါပေမဲ့တချို့က Bob လိုပဲအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ပြောသမျှကိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
အဆိုပါသတင်းဆိုးတစ်ခု porn စွဲကန်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေငြိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပြောကိုချစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီအပြုအမူကိုချိုးဖောက်ဆိုလိုတာကတစ်ဦးအမူအကျင့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်နေလျှင်သင်အပြုအမူကိုချိုးဖျက်လို့မရပါဘူး။
သူ့ကိုသူ၏ Domme နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရပ်တန့်နှင့်သူ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဘို့သူ့ကိုနောက်ကျော '' အဖြစ်မှန်လိင် 'ဖို့အတွက်ရဖို့များအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘော့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Domme ်ထမ်းဆောင်စောင့်ရှောက်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှကြွလာနှင့်သင်ယခုသူမ၏နှင့်သူမပေးဖျော်ဖြေရေးစွဲသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကပြန်လည်ဝင်ရောက်ပေါ်မှာရှိသမျှအဆက်အသွယ်နှင့်အလုပ်ကိုရပ်တန့်ထားရာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးစှဲလမျးသူဖြစ်လာရန်ပြုသကဲ့သို့အချိန်ကြာခြင်းနှင့်လူအများစုပါဝင်ပတ်သက်အလုပ်လုပ်ဖို့ချင်ကြပါဘူး။
ငါနှစ်အတွင်းဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဤမြင်ရပါတယ်ကြောင့်ကောင်းသောခံစားရလို့ကန်ဖို့လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းစွဲနေတဲ့စစ်မှန်သောနှင့်လေးနက်သောပြဿနာဖြစ်ပြီး, သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, သင့်မိသားစုနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲဖို့လမ်းကိုဆင်းတာပေါ့ခံစားရဘူးဆိုရင်ငါ့အအကြံပြုချက်ယခုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်ကပိုမိုနက်ရှိုင်းတွင်းကိုတူးရှေ့၌သင်တို့လုပ်ရပ်များ reverse ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအစဉ်မပြတ်တော့ဘူးကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ fix မှယူပါလိမ့်မယ်, က fix, ဒါပေမယ့်ကြာကြာအဲဒီမှာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
သင်စိုးရိမ်ပူပန်စီးနေတစ်ခုသို့မဟုတ်လူမှုရေးပြဿနာရှိကွောငျးတှေ့လျှင်သင်တို့ကိုငါနေတဲ့စိတ်ရောဂါကိုတွေ့မြင်အကြံပြုနှင့်သင့်ဧရိယာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းစှဲအထူးသူတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူထံမှစိတ်ကျန်းမာရေးအကြံပေးခြင်းများအပြင်၌သငျမှတဆင့်ကူညီပေးဖို့တချို့ဆေးဝါးနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်မယ်လို့ ။ ဒါဟာလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သောအရသာမြားတှငျပါဝငျခွငျးကျော်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်မထိုက်တန်ပါဘူး။